ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “၂၀၁၀ မယ်သီတာ”
ဟောကနဲ ၊ ဟောကနဲ တစ်ပုဒ်ပြီးတစ်ပုဒ်ပါလားဗျို့...။
ဟိုက်))) ဖိုးသူတော် ဦးပေါရဲ့ တယ်လာတဲ့ စာချိုးပါလား။
မယ်သီတာခမျာ သူလုပ်မှ ဒုက္ခရောက်ပါပြီ။
☀ နအဖကို မုန်းသာ မုန်းပြီး လက်တွေ့ဘာမှမလုပ်လျှင် ဘာများအကျိုးရှိမည်နည်း?
☀ မိမိနဲ့ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်သူတွေကို အတင်းအဖျင်းပြောနေလို့ ဘာများအကျိုးရှိမည်နည်း?
☀ နအဖ မတရားလုပ်နေတာတွေသိနေပြီး မဆန့်ကျင်ဘူးဆိုရင် ဘာများအကျိုးရှိမည်နည်း?
☀ နအဖကို စောင်းမြောင်းရေးလို့လည်း ဗိုလ်ချုပ်တွေက ရှက်ပြီး အဏာစွန့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
☀ လောကကြီးမှာ အလုပ်မလုပ်ပဲ အကျိုးကျေးဇူးမရနိုင်ပါ။
အကျိုးမရှိတာတွေ ပြောဆိုနေတာထက်.. နအဖကို ဘယ်လိုဆန့်ကျင်ရမလဲ… နအဖဆန့်ကျင်နေတဲ့သူတွေကို ဘယ်လို မြေတောင် မြှောက်ပေးရမလဲဆိုတာတွေကို တွေးခေါ်ရေးသားခြင်းက ရင့်ကျက်သည့် လူကြီးတစ်ယောက်၏ စိတ်ဓါတ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်။
အရေမရအဖတ်မရအလုပ်ကို ဘိန်းလိုစွဲနေသူများအား ဆန့်ကျင်နေသည့်
ဘီလူးက ခေါင်းဆယ်လုံးတောင်...ပါးစပ်တပေါက်မအားရင် တပေါက်ပေါက်တော့ အားတယ်လေ...စကားပြောဖေါ်ရတော့ မပျင်းဘူးပေါ့..
ဖိုးသူတော်ဦးပေါနဲ့ တွေ့ မှဘဲ တော်လေးဝဝင်မယ်သီတာခမြာဘယ်ချောင်ကိုကပ်နေရမှန်း
နအဖကို မုန်းသာ မုန်းပြီး လက်တွေ့ဘာမှမလုပ်လျှင် ဘာများအကျိုးရှိမည်နည်း?
If so, what are you doing now ?
That's exactly what you are doing by writing this comment.
How can you know whether he or she is not against NaAhapha in his or her own way just by looking at the blog page? That's too prejudice!!
If so , shall we all shut up ? That's against freedom of expression which comes along with Democracy that you are fighting for.
So, you better don't waste your time here. If you think writing one's own thoughts is useless, then the same principle should apply to writing the comments.Because it is useless too.
If you think you can, go ahead and write it. Why ask others ? In this internet era, people have freedom of choice : what they want to read and write on internet. So, it is too much to insist somebody to write what you only wish to read. That's the evil spirit of dictator.
☀ သူတစ်ပါးမျက်ချေးပဲ လက်ညှိးထိုးတာ
☀ ဦးသန်းရွှေ ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ နအဖ၊ ဒီမိုအဖွဲ့တွေကို အတင်းအဖျင်းပြောတာ
☀ မြန်မာအချင်းချင်း အိမ်ကျယ်လုပ် ရန်ဖြစ်တာ
☀ အဖြူ၊ ကုလား၊ တရုတ်တွေကို ထိရင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံတာ
☀ အဖြူ၊ ကုလား၊ တရုတ်တွေရဲ့ ဘုန်းတော်ကို ဖွဲ့တာ
☀ မွတ်ဆလင်ကို ထိရင် ဒေါသအရမ်းထွက်တာ
စတဲ့လုပ်ရပ်တွေနဲ့ အပြုအမူတွေကို နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်လို့ ခေါ်တယ်ဗျ။ တာဝန်မဲ့ပြီး တိုင်းပြည်အရေးကို လက်ပိုက်ကြည့်နေတဲ့သူတွေကို ပြည်သူတွေလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေကို လုံးဝ ဝေဖန်ခြင်းမပြုရဘူး။ ပြည်သူတွေကို မစော်ကားရဘူး။ ခင်ဗျား ဝေဖန်ချင်ရင် တကယ်လုပ်နေတဲ့သူတွေ… အသက်တွေ.. ဘ၀တွေ စတေးနေတဲ့သူတွေကို ဝေဖန်ပါ။ ကျုပ်ဟာ တာဝန်မဲ့စွာ တိုင်းပြည်အရေးကို ဘာမှမလုပ်ပဲ ဘေးမှ လက်ပိုက်ကြည့်နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ပြည်သူပေါ့ဗျာ။ ဒါ့ကြောင့် ပြည်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျုပ်ကို မဝေဖန်ရဘူးလေ။ သဘောပေါက်ပါ။ ဟိဟိ
ပြည်သူဆိုတဲ့ တံဆိပ်ကို အလွဲသုံးစားပြုရင်း ဘာမှမလုပ်ပဲ အတင်းအဖျင်းပြောနေတဲ့
ဟိုက်ရှားပါး....ကိုပေါ ဘယ်သူနဲ့ ရန်ဖြစ်နေပါလိမ့်။ မန့် ရမှာတောင် ခပ်လန့် လန့် ပဲ။